Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.2 Human computation
Ny tetik'asa momba ny fanatanterahana ny olombelona dia miteraka olana goavana, mamoy izany amin'ny ampahany tsotra, alefaso amin'ny mpiasa maro ary arotsaho ny vokatra.
Ny tetik'asa fanatanterahana ny olombelona dia mampifandray ny ezaka ataon'ny olona maro miasa amin'ny microtasks tsotra mba hamahana ireo olana izay tsy mety ho an'ny olona iray. Mety manana olana momba ny fikarohana mety ho an'ny fanatanterahana olona ianao raha toa ianao efa nieritreritra hoe: "Afaka mamaha io olana io aho raha manana mpikaroka an'arivony an'arivony."
Ny ohatra asehon'ny tetikasa fanatanterahana ny olombelona dia ny Galaxy Zoo. Ao anatin'ity tetikasa ity dia mpilatsaka an-tsitrapo maherin'ny iray hetsy no nametaveta sary vahindanitra iray tapitrisa teo ho eo izay manana fahamendrehana mitovy amin'ny teo aloha - ary kely kokoa ny ezaka ataon'ny astronoma matihanina. Io fitomboana lehibe nasehon'ny fiarahamiasa io dia nitarika ho amin'ny fitrandrahana vaovao momba ny fomba famolavolana ny vahindanitra, ary nahatonga ny vondron'olona vahindanitra vaovao antsoina hoe "Green Peas".
Na dia toa lavitra loatra amin'ny fikarohana ara-tsosialy aza ny Galaxy Zoo dia misy toe-javatra marobe izay ahitan'ny mpikaroka ara-tsosialy ny code, sokajy, na mametaka sary na lahatsoratra. Amin'ny toe-javatra sasany, ity fanadihadiana ity dia azo atao amin'ny ordinatera, saingy mbola misy endrika fanadihadiana saro-pady izay sarotra ho an'ny ordinatera fa mora ho an'ny olona. Ireo tsotra ireo dia mora ho an'ny olon-tsotra mikrô fahatokisana fa afaka manova ny tetik'asa fanatanterahana ny olombelona.
Tsy ny mikrôba fotsiny ihany no ao amin'ny Galaxy Zoo, fa ny ankamaroan'ny tetikasa. Galaxy Zoo, ary ny olona hafa computation tetikasa, matetika mampiasa mivaky-mampihatra-manambatra ny tetika (Wickham 2011) , ary indray mandeha ianao hahatakatra izany ianao tetika ho afaka hampiasa azy io mba hamaha olana maro. Voalohany, olana goavana nozaraina ho karazana olana kely. Avy eo, ny asan'ny olombelona dia ampiharina amin'ny olana madinidinika tsirairay, tsy miankina amin'ireo sehatra hafa. Farany, ny vokatr'io asa io dia mifamatotra amin'ny famolavolana vahaolana. Raha jerena ny zava-misy, andeha hojerentsika ny fomba nampiasana ny paikady fampitomboana-fampiharana amin'ny Galaxy Zoo.